सुनको मुल्यमा आज गिरावट, कति पुग्यो ? – Suchana Hub
सुनको मुल्यमा आज गिरावट, कति पुग्यो ?
काठमाडौं । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यथावत रहेको थियो भने आज भने मुल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । बुधबार प्रति तोला १ लाख ४०० रुपैयँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ६ सय घटेर बिहीबार ९८ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
यस्तै बुधबार प्रति तोला ९९ हजार ९०० तोकिएको तेजावी सुन आज ९८ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य पनि घटेर तोलामा १ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । हिजो चाँदी प्रति तोला १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
Previous कति छ आज सुनचाँदीको मुल्य ?
Next लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै युजर आईडी र पासवर्ड पाउने, ब्रोकर धाउनु नपर्ने